‘पीडाबाट जन्मिएको गोर्खा ग्रुपले शिक्षा सहित कृषि र पर्यटनमा पनि काम गर्दैछ’ – Rajmarg Online
‘पीडाबाट जन्मिएको गोर्खा ग्रुपले शिक्षा सहित कृषि र पर्यटनमा पनि काम गर्दैछ’
अध्यक्ष, गोर्खा प्राली
दाङ सहित राप्तीका लाहुरेहरुले सञ्चालन गरेको गोर्खा ईन्टरनेशनल सेकेण्डरी स्कूल जिल्लाकै चर्चित नीजि स्कूलहरु मध्य पर्छ । शिक्षाको आवस्यकता महसुस गर्दै लाहुरेहरुले घोराही सहित तुलसीपुर र लमहीमा पनि स्कूल सञ्चालन गरे । स्कूल मात्र नभई घोराही, तुलसीपुर र लमहीमा कलेज पनि सञ्चालनमा छ भने घोराहीमा गोर्खा हस्पिटल पनि सञ्चालन भैरहेको छ । यी सम्पूर्ण निकायहरुको छाता संगठनको रुपमा गत वर्ष मात्रै गोर्खा ग्रुप प्राली निर्माण भएर थप कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दैछ । गोर्खा गु्रपले वैशाख १९ गते विहिबारदेखि सप्ताहव्यापी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । गोर्खा ग्रुपका शेयर होल्डर सहित विभिन्न ब्यक्तिहरु सहभागी हुने ‘गोर्खा ग्रायण्ड एसेम्बली २०१९’ र गोर्खा गु्रपको बारेमा अध्यक्ष मानबहादुर बुढासँग गरिएको कुराकानी :
विहिबारदेखि ‘गोर्खा ग्रायण्ड एसेम्बली २०१९’ नाम दिएर सप्ताहब्यापी कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ? यो कस्तो प्रकारको कार्यक्रम हो ?
गोर्खाली लाहुरेहरुले २०५५ सालमा स्थापना गरेको घोराहीको गोर्खा बोर्डिङ स्कुलले धेरै अभिभावकहरुको मन जित्यो । अभिभावकहरुकै अनुरोध र आग्रहमा हामीले तुलसीपुर र लमहीमा समेत विद्यालयहरु सञ्चालन ग¥यौँ । विद्यालय मात्र हैन, अहिले घोराही, तुलसीपुर र लमहीमा कलेजहरु पनि सञ्चालन भैरहेको छ । पहिले हामी सानो परिवार थियौँ, अहिले बढेर धेरै ठुलो परिवार हुन थालेपनि प्राली बनाउनुपर्ने महसुस भयो । गत वर्ष मात्रै हामीले ९५ जनाको सहभागीतामा गोर्खा ग्रुप प्राली बनायौँ । यतिका संरचनाहरु छन् । कस्ले कहाँ कुन जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेको छ भन्ने थामा नहुँन पनि सक्छ, पहिलो कुरा त परिचय होस् भन्ने हो । त्यसको लागि बाहिरबाट अधिकांश साथीहरु आउनु हुन्छ । दोस्रो कुरा गोर्खा ग्रुपले सञ्चालन गरेका शैक्षिक गतिविधिहरुको समिक्षा हो । र भोलीका दिनहरुमा के गर्न सकिन्छ भन्ने योजनाका लागि ‘गोर्खा ग्रायण्ड एसेम्बली २०१९’ गर्दैछौँ ।
‘गोर्खा ग्रायण्ड एसेम्बली २०१९’मा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । के के गर्दै हुनुहुन्छ ?
सप्ताहब्यापी कार्यक्रमको पहिलो दिन उद्घाटन कार्यक्रम छ । तुलसीपुरमा रहेको गोर्खा बार्डिङ स्कूलमा विहिबार दिउँसो २ बजे उद्घाटन हुनेछ । पोखरा विश्वविद्यालयका पुर्वउपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । त्यहि दिन लामो समय देखि गोर्खा कपको पनि उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ । २० गते घोराहीको गोर्खा स्कुलको प्राङगणमा ११ बजे अभिभावक भेलाको आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा सबै अभिभावकहरु आउनुहुनेछ । २१ गते दिन विहान १० बजे लमहीमा स्कुलको उद्घाटन कार्यक्रम छ । गोर्खा मोडेल सेकेण्डरी स्कुलको स्थापना गरेका छौँ । प्रा.डा. बरालले उद्घाटन गर्नुहुनेछ । २२ गते घोराहीको माला ईन होटलमा साधारणसभा कार्यक्रम छ । विहान ९ बजे कार्यक्रम हुनेछ । २३ गते घोराहीको भिक्टोरिका ईन्टरनेशनल कलेजको १० औँ बार्षिकोत्सव कार्यक्रम भिग्रेली भिलेज रिसोर्टमा हुनेछ । त्यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी सकारात्मक सोँच अभियान सञ्चालन गर्दै आउनु भएका प्रसिद्ध ब्यक्ति कर्ण शाक्य रहनु भएको छ । २४ गतेको अन्तिम दिन तुलसीपुरको गोर्खा स्कुलमा समापन कार्यक्रम रहेको छ । भने गोर्खा कपको पनि पुरस्कार वितरण र समापन कार्यक्रम छ ।
तपाईहरुको यो कार्यक्रमले खास गरी दाङ र सिंगो राप्तीका लागि के फाईदा हुनेछ ?
हामी भनेको पीडित समुदाय हो । लाहुरे हौँ । हामीले विगत जस्तो भोगेपनि अबको भविष्य निर्माणमा राज्यलाई सहयोग कसरी गर्न सक्छौँ भनेर नै पहिलो योजना शिक्षालाई बनाएका हौँ । म लगाएत राप्तीका ९५ जना ब्यक्तिहरु मिलेर यो काम गर्दै आएका छौँ । हामीलाई सहयोग गर्ने सयौँ कर्मचारीहरु छन् । अहिलेको समय घरका दुई भाई नमिलेर छुट्टा छुटुटै बस्दै आएको समयमा हामी ९५ जना मिलेर गरेको यो कामले समाजमा एकताको सन्देश जान्छ भन्ने लागेको छ । एकतामा बल हुन्छ भने जस्तै एकताबाट विकास र समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ ।
धेरै लाहुरे साथीहरुले विभिन्न देशमा पुगेर कमाउनु भएको छ, अनुभव गर्नुभएको छ । उहाँहरुले दाङ र राप्तीमा लगानी गरेर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उहाँहरुलाई जानकारी हुन्छ । एकतातिर एकता र अर्को तिर समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा हुनेछ । यहाँ बस्ने मानिसहरु सँग पनि लगानी गर्न सक्ने क्षमता त छ । लाहुरेहरु मिलेर सानो सानो पुँजी संकलन गरेर ठुलो लगानी गर्न सकिने रहेछ भन्ने सन्देश नै राप्तीको लागि महत्वपुर्ण फाईदाको विषय हो ।
गोर्खा ग्रुपले अहिलेसम्म शिक्षाका लागि काम गरेको छ । र सफलता हासिल पनि गरेको छ । यो सफलता पछाडि दर्शन, सिद्धान्त वा सुत्र के हो ?
यो अभियान हाम्रो पीडाबाट उत्पन्न भएको हो । भोको मान्छेलाई एउटा पाउरोटीको जति महत्व हुन्छ, त्यति अघाएको मान्छेलाई हुँदैन । हामी पहाडबाट झरेको, गरिव गुरुवा, जनजाति, पछाडी परेको समुदायको अभियान हो । र त्यस्तै ब्यक्तिलाई घरआँगनमा चाहिएको हो शिक्षा । हैन भने अरुले त भारतको देहरादुन र अन्य देशमा गएर पढ्न सक्छन् नी । भन्नेहरुले भन्छन् यो स्कुल महंगो छ । वास्तबमा हामीले विद्यार्थीलाई जति दिएका छौँ, त्यति लिएका छैनौँ ।
अर्को कुरा पढाउने भन्दैमा परिक्षाफलको अंकलाई आधार मानेर पढाउने हैन । त्यो विद्यार्थीको जीवनमा आबस्यक पर्ने विषयहरु के के हुन ? त्यो विद्यार्थीहरुलाई दिने हो । विद्यार्थीमा भएको प्रतिभा र क्षमताको पहिचान गर्ने हो । हाम्रा विद्यार्थीहरु विक्ने विद्यार्थीहरु हुन् । जुन विषय पढेका छन्, त्यो क्षेत्रमा उनिहरुले अहिले राम्रो काम गरेका छन् ।
अहिलेका युवाहरु, विद्यार्थीहरु विकृतिमा लागिरहेका छन । हाम्रो शिक्षा विद्यार्थीहरुलाई मात्र सुधार गर्ने होईन । समाजलाई नै कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हो । अहिले लागु औषध दुब्र्यसनको ठुलो भयावहपुर्ण जोखिम छ । हामीले हाम्रै विद्यालयबाट लागु औषध दुब्र्यसन विरुद्धको अभियान सुरु गरेका छौँ । प्रदेश भर त्यो अभियान पुगेको छ । बसन्त पुनले त्यो अभियानको नेतृत्व गरीरहनु भएको छ ।
गोर्खा ग्रुपले अहिलेसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नु भएको छ र सेवा दिदै आउनु भएको छ । अब कृषि, पर्यटन र होटल क्षेत्रमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्नमा आएको छ । के योजना छ ?
अहिलेको शिक्षा व्यवहारिक भएन भनेर ठुलो गुनासो छ । विद्यार्थीहरुलाई पढाएर मात्र भएन । पढेको कुरा लागु हुनु परेन ? काम गर्ने ठाउँ बनाउने कस्ले ? सरकारले मात्र त सबै सक्दैन । नीजि क्षेत्रबाट पनि हामीले पढाएका विद्यार्थीहरुलाई हामीले नै रोजगार दिनु पर्छ, उत्पादन र सेवालाई जोड दिनुपर्छ भन्ने सोँच बनेको छ । त्यसैले हामीले पढेका विद्यार्थीहरु विज्ञान र प्रविधि अनुसार उत्पादनका लागि काम गर्ने छन् । त्यसैले कृषि, होटल र पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्ने हो ।
त्यो उत्पादन सिंगो देश र विदेशसम्म पुग्ने गरी काम हुन्छ । यो साधारण सभाले भोलीका दिनहरुमा कसरी अगाडी जाने भन्ने विषयमा छलफल हुनेछ । र मलाई विश्वास छ, राम्रो निर्णय हुनेछ ।
अन्त्यमा केहि भन्न चाहनु हुन्छ कि ?
हामी सकारात्मक सोँच बोकेर हिडेका छौँ । गोर्खा ग्रुपको सम्पुर्ण निचोड भनेको देशको समृद्धि नै हो । जहाँबाट सकिन्छ, विकास र समृद्धिको लागि काम गर्ने हो । सकारात्मक सोँचले काम गर्ने हो भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ । हाम्रो कुराहरु आम सर्वसाधारण समक्ष अबसर दिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यबाद छ ।